News - Horumarinta sanduuqyada iftiinka xayeysiinta
Asalka sanaadiiqda iftiinka xayeysiinta waxaa dib loo raadsan karaa 1970s, horraantii Waqooyiga Ameerika, iyo goor dambe Yurub.
Marka la barbardhigo Waqooyiga Ameerika iyo Yurub, warshadaha sanduuqa fudud ee Shiinaha ayaa xilli dambe bilaabay, welina waa warshad soo ifbaxaysa. Si kastaba ha noqotee, warshadaha sanduuqa iftiinka Shiinaha ayaa si dhakhso leh u horumarey, gaar ahaan dabayaaqadii 1990-meeyadii ilaa maanta. Iyada oo horumarka degdegga ah ee mashiinnada gudaha, warshadaha sanduuqa iftiinka Shiinaha ayaa galay xilli horumar deg deg ah. Shiinaha sidoo kale wuxuu noqday mid ka mid ah saldhigyada wax soo saarka ee sanduuqyada fudud ee adduunka.
Xayaysiisyadii ugu horreeyay ayaa dhammaantood lagu soo bandhigay qaab sawir gacmeed lagu sawiray calanka, tabeeleyaasha, darbiyada, astaamaha waddooyinka, iyo daaqadaha dukaamada. Laga soo bilaabo muujinta qoraalka hore, si loogu daro walxaha rinjiyeynta si loogu daro midab si loo soo jiito dareenka dadka.
Mar dambe, 1930-meeyadii, calaamadaha dukaamada iyo daaqadaha dukaamada waxay bilaabeen inay isku daraan dhawaaqa, iftiinka, iyo saamaynta korantada, iyadoo la adeegsanayo sanaadiiqda iftiinka ma guurtada ah, sanduuqyada nalka loo yaqaan 'crystal light', sanaadiiqda nabarrada nabarrada, iwm. shaashadda ayaa shidan
Markii dambe, iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda, xayeysiisyada banaanka sida nalalka neon, sanduuqyada laydhka rogroga, iyo leexashada seddex geesoodka ah ayaa ka soo muuqday waddooyinka, oo ay weheliyaan qalabyo shaashado kala duwan iyo aaladaha nalalka ee waqtiga lagu xakameeyo, iyo farsamo ahaan lagu ogaaday "Hormarin Weyn" . Jidku aad ayuu u kala jaad yahay, qaabka muujinta sidoo kale si weyn ayaa loo hagaajiyay. Fiidkii, nalalka neon ee midabada leh ayaa magaalada ka dhiga mid aad u qurux badan.
Markii dambe, markii ay warshaddu sii waday inay horumariso, tikniyoolajiyadda LED-ka waxay samaysay boodbood iyo horumar, iyo xayeysiis ballaaran oo dijitaal ah oo bannaanka ah sida LED shaashadaha waaweyn, qeexitaanka sare ee bannaanka, iyo fiidiyowga LCD ayaa soo galay jihada dadka. Midabka iyo kacsanaantu waxay dadka siinayaan saameyn muuqaal oo xoog leh Sanduuqa nalka fudud ee Dukaanka - Hadda, sanduuqa nalka firfircoon iyo teknolojiyadda saadaasha 3D ayaa la soo bandhigi doonaa lana dallacsiin doonaa, sawirkuna mar dambe ma ahaan doono hal xaalad taagan. Laydhka joogtada ah iyo joogitaanka sanduuqa iftiinka firfircoon ee LED wuxuu si wax ku ool ah u hagaajin karaa saameynta muuqaalka dadka wuxuuna kordhin karaa heerka isticmaalka aagga qaybta xayeysiinta. Saamaynta xayeysiintu waa mid iska cad. Waxay si joogto ah u ifi kartaa maalin iyo habeen, isugeynta dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaaqa ayaa soo jiita indhaha dadka. Erayada iyo qaababka kaladuwan waxay ugu boodaan si habsami leh waxayna marba marka ka dambaysa ka tarjumayaan saamaynta muuqaalka ee xoogga leh, iyagoo qancinaya aragtida muuqaalka ee qofka daawanaya.
Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Calaamadaha Iftiiminaya, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Xayeysiinta, Saxeex Farmashiyaha,